रिप्प्पल: प्रतिक्रिया, कोचिंग र मान्यता | Martech Zone
रिप्प्पल: प्रतिक्रिया, कोचिंग र मान्यता
मंगलवार, जुलाई 10, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
हामीले यसमा परिवर्तन गर्यौं यामेरमा कार्यप्रवाह गर्दै पछिल्ला केही हप्ता र यो वास्तवमै राम्रो बाहिर काम गरिरहेको छ। आज पनि मार्टी अफिसमा छन, स्तिफनसले रातभर घरमा काम गरे, म बल स्टेटमा छु, निखिल भारतमा र जेन घरबाट काम गर्दैछिन। एक अर्कालाई सूचित राख्न हामी यामरलाई अपडेट गर्दैछौं एक अर्कालाई हामी कहाँ छौं, हामी केमा काम गरिरहेका छौं, र केमा मद्दत चाहिन्छ भनेर अद्यावधिक राख्न। यो हाम्रो संगठन भित्र एक महान सामाजिक संचार उपकरण हो।
के तपाईं यदि ती कुराकानीहरू लिन र लक्ष्य सेटिंग, कोचिंग, मान्यता र प्रतिक्रिया थप्न सक्नुहुन्छ, जबकि? र्याप्पलले भनेको यो छ कि सामाजिक प्रदर्शन प्लेटफर्म। सबै प्रयोगकर्ताको अनुभवमा जुन फेसबुकसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले यसको प्रयोग गर्न सजिलो छ। र्याप्पलले मलाई धेरै सम्झाउँछन् Yammer, तर टोली निर्माण र मान्यताका लागि अतिरिक्त सुविधाहरूको साथ।
आजको कार्यस्थललाई प्रदर्शन व्यवस्थापनको लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ। रिप्प्पल एक वेब-आधारित सामाजिक प्रदर्शन प्रबन्धन प्लेटफर्म हो जसले कम्पनीहरूलाई सामाजिक लक्ष्यहरू, लगातार प्रतिक्रिया र अर्थपूर्ण मान्यता मार्फत प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
के हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो सीआरएमको साथ सीधा तपाईंको वर्कस्ट्रीमिंग, लक्ष्य राख्ने र प्रतिक्रिया एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ? तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ सेल्सफोर्सले फेब्रुअरीमा रिप्प्पल फेरि किन्नुभयो। र्याप्पल पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन्छ बिक्री बल (र कुराकानी)। यो पनि मोबाइल तयार छ।